MAPAR : Nahoana no mikatsaka mafy ny minisiteran’ny Atitany ? -
AccueilRaharaham-pirenenaMAPAR : Nahoana no mikatsaka mafy ny minisiteran’ny Atitany ?
09/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Miady fo mafy ny hahazoana ny minisiteran’ny Atitany ny Mapar. Mipetraka ny fanontaniana hoe : “ nahoana no mikatsaka mafy ny minisiteran’ny Atitany izy ireo ? Maika hangala-bato ? Izay rehetra manelingelina ny fahazoan’ny Mapar izany dia natsangany ho fahavalo, ary haratsiana anaty gazety tahaka ny mahazo an’i Mahafaly Olivier Solonandrasana izay minisitry ny Atitany amin’izao fotoana izao. Ny gazetin-dRavatomanga sy ny fahitalavitra Viva an’i Andry Rajoelina no ampiasaina amin’izany, ka maka olona maherihery fiteny mihitsy manatontosa ilay fanosoram-potaka.
Vao tsy ela akory izay ny Kolonely Lylyson no niteny tao amin’ny Fahitalavitra Viva ka nilaza fa “mampitandrina izay mbola mitady hanendry an’i Mahafaly Olivier ho minisitry ny Atitany”. Fa iza moa izy no hampitandrina olona toa izany ? Mba fantatsika rehetra ihany hoe taiza izany kolonely Lylyson izany nandritra izay fotoana elabe izay ? Voatery nampiteny ity kolonely ity mihitsy ny Mapar mba hatongavany amin’ny tanjony. Ho fanampin’ilay tenin’ny Lylyson dia nataon’ny gazetin-dRavatomanga lohateny saika tato ho ato foana ny fanenjehana sy fanosoram-potaka an’i Mahafaly Olivier. Mazava ny antony. Satria matahotra izy ireo sao dia mbola voatazona ao amin’io minisiteran’ny Atitany io ny minisitra ankehitriny.
Saika ho isan’andro tokoa dia misy hatrany ny fanaratsiana ity praiminisitra teo aloha Mahafaly Olivier ity. Ny fatahorana azy no tena anton’izany, ka ny vahaolana voalohany hitan’ny Mapar dia ny fanaratsiana any anaty gazety. Aza gaga isika raha hiharan’izany fanaratsiana izany foana ny Praiminisitra teo aloha.
Ady seza no ao ambadiky ny fanaratsiana ny Praiminisitra teo aloha. Noho ny fikasana fatratra te hahazo ny minisiteran’ny Atitany dia ilay minisitra misahana izany ankehitriny aloha no hosoram-potaka. Raha dinihina tokoa mantsy ireny fanaratsiana anaty gazety izay miresaka ny raharaha kolikoly lazaina fa maha voasaringotra ny Pm teo aloha ireny, dia tsy mitombina velively. Raha tena mpanao kolikoly tokoa ve ny praiminisitra teo aloha tsy efa nigadra izy. Ampahafirin’ny kolikoly avo lenta maha voarohirohy an’i Mamy Ravatomanga any Frantsa tokoa moa ny raharaha maha voarohirohy ny Praiminisitra teo aloha.
Efa nanokafan’ny Fampanoavana ao Paris fanadihadiana mihitsy izany Mamy Ravatomanga izany tamin’ny raharaha maloto momba ireo tranony any Levallois- Perret, izay mitentina 4 tapitrisa Euros. Hatrany an-dafy hatraty Madagasikara dia feno raharaha maloton-dRavatomanga ny fitsarana. Mbola handeha ato ho ato eny amin’ny Fitsarana koa mantsy ny fanodinkondinam-bola mitentina 4 miliara Ariary tamin’ny andron’ny Tetezamita tao amin’ny Jirama mahavoasaringotra azy. Ny mahagaga dia ireto gazetin-dRavatomanga mitatitra dosien’olona, kanefa tsy mahita ireo dosie maloto mikasika ny “patron”-ny. Mba jereo tokoa aloha ny maloto eo an-tampon-kandrina vao miresaka ny an’ny hafa.
Hapetraka ny ara-dalàna. Raha ny nambaran’ny filohan’ny komity mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI), Hery Rakotomanana, andro lehibe ho an’ny fifidianana anio. Araka izany, hanomboka anio, 1 Desambra ihany koa, ny fotoana vaovao hanavaozana sy ...Tohiny